Manje iLida Group inezinsizakalo ezingaphansi eziyisikhombisa
imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni angaphezu kwezi-145 nezifunda.
ILida Group inikezwe iSisekelo Sokukhombisa Esakhiweni Somhlangano Esifundazweni SaseShandong.
Isizinda samafutha negesi Labo ...
ILida Integrated Camp House isetshenziswa kabanzi ngenhloso yezabasebenzi neyezempi kumaphrojekthi Wenkontileka Jikelele, amaphrojekthi wensimu ka-Oyili negesi, Amaphrojekthi we-Hydroelectric, amaphrojekthi wezempi, amaphrojekthi wemikhakha yezimayini, njalonjalo, enzelwe ukugqugquzela indawo yesikhathi esifushane nesikhathi eside. Indlu yekamu labasebenzi bakaLida eyakhiwe ngabakwaLida iyasabeka futhi yenzelwe ngokukhethekile ukuhlinzeka ngokusetshenziswa okuphezulu nokunethezeka. Abakhiqizi bekamu labasebenzi abakhethwe eLida bangahlinzeka ngokushesha, okulula, okungabizi futhi ...
Flat Pack Isitsha Ho ...
Incazelo emfushane I-LIDA flat pack container house ilungele kahle izindawo zokwakha, izinkambu zokwakha kanye nezindawo zokumba, lapho zizophendulwa kahle zibe ngamahhovisi, izindawo zokuhlala, amakamelo okushintsha nezindlu zangasese. I-LIDA flat pack container house yenziwe ngezinto zemvelo futhi icishe ibe ngu-100% kabusha. Ziletha izinzuzo ezinkulu zemvelo (ukwahlukanisa okushisayo, ukuncishiswa komsindo) ukwethula isisombululo se-LIDA esivumelanayo, esiguqukayo, nesimeme ...
Ikamu Labasebenzi elihlanganisiwe ...
Prefabricated House La ...
ILida Integrated Camp House isetshenziswa kabanzi ngenhloso yezabasebenzi neyezempi kumaphrojekthi Wenkontileka Jikelele, amaphrojekthi wensimu ka-Oyili negesi, Amaphrojekthi we-Hydroelectric, amaphrojekthi wezempi, amaphrojekthi wemikhakha yezimayini, njalonjalo, enzelwe ukugqugquzela indawo yesikhathi esifushane nesikhathi eside. Amakamu okusetshenzwa kuwo amaminerali aseLida (i-labor Camp house) aklanyelwe ukuletha isixazululo esifanelekile nangokonga kakhulu ngokwakhiwa kwezindlu ezakhiwe ngaphambili, ukwakhiwa kwendlu yeziqukathi noma zombili izakhi zokukhiqiza ...
Flat Pack Modular Modula ...
Modular Flat Pack Container Building ISINGENISO SENDLU YOKUPHAKATHI. Indlu yesitsha yakhelwe futhi yathuthukiswa ngokuya ngosayizi ojwayelekile wesitsha sokuthumela. Ingenakho ukushisa futhi ayinamanzi. Isetshenziswa kabanzi njengehhovisi, igumbi lomhlangano, indawo yokulala, isitolo, idokodo, indlu yangasese, isitoreji, ikhishi, igumbi lokugeza njalonjalo. Izindlu zesitsha seLida zifaka indlu eyisitsha sephakethe, indlu yesitsha esigoqekayo (indlu yesitsha esongekayo), indlu yesiqukathi enwebekayo, indlu yesitsha sokushisela (i-containe eyenziwe ngokwezifiso ...
20FT Hlanganani Kalula T ...
Indlu yamakhonteyina amafulethi e-LIDA ifaneleke kahle ukuba kwakhiwe izindawo zokwakha, izinkambu zokwakha kanye nezindawo zokumba, lapho zizophendulwa kahle zibe ngamahhovisi, izindawo zokuhlala, amakamelo okushintsha nezindlu zangasese. I-LIDA flat pack container house yenziwe ngezinto zemvelo futhi icishe ibe ngu-100% kabusha. Ziletha izinzuzo ezinkulu zemvelo (ukwahlukanisa okushisayo, ukuncishiswa komsindo) ukwethula isixazululo se-modular LIDA flat pack container container ...
Iphakethe Flat Living Expan ...
Okuningiliziwe Okucacisiwe Ukushisela isitsha 1 ....
Supply High Qualtiy Po ...
Izindlu zeziqukathi zeLida zifaka iphakethe eliyicaba eliqukethe ...
I-Modular House Containe ...
landa i-portabl modular ...
Lida Isolate Modular ...
Ukwakha Isibhedlela / Isitsha ...
I-Construc eyenziwe ngaphambilini ...
ILida K modular prefab house (izindlu ezenziwe ngaphambilini ...
China eshibhile 20 40 FT L ...
Lida T imodeli steel lishe laba ngumlotha (prefabricated ...
Isingeniso seLida I ...
Factory Supply Prefabr ...
Izici zeLida Porta Cabin (Modular Ho ...
K Model Camping lishe laba ngumlotha ...
China Steel Uzimele Pref ...
LIDA isakhiwo sensimbi (pre-engineering ...
Ukuwa kuka-2021: Umkhosi weCorpus Christi, Insimu Yethanga, Indlu Ye-Haunted
Yize eminye imisebenzi ikhanseliwe noma ihlehlisiwe ngenxa yobhadane oluqhubekayo lwe-COVID-19, asekhona amathuba amaningi okuphuma kuma-bend asogwini. Bona uhlu olungezansi lwemikhosi, amasimu amathanga nezindlu ezihaunted ezizungeze le ndawo. Ingabe ikhona imicimbi engezwe? Thumela imininingwane ...